Home » Itylọ Ọrụ Mmepe Ọbịa » Ugwu Washington Hotel eji enyere ndụ aka: Orchestra, ukwe, telegraph
Ntọala ala maka ụlọ oriri na ọ Mountụ Mountụ Mount Washington dị na Bretton Woods, New Hampshire, dị na 1900 ma wuo ya na 1901. Ọ bụ Joseph Stickney, bụ onye na-azụ ego na New York nke nwere Mt. Lelọ mara mma. Ka ọ na-erule ngwụsị 1890, Stickney kpebiri iwu ụlọ nkwari akụ ọzọ mara mma na-abụghị nke Mt. Lelọ mara mma. E wetara mmadụ narị abụọ na iri ise ndị omenkà Italiantali maka ọrụ iwu ụlọ ahụ. Ha biri n'ụlọ obibi nke ala ahụ, nke e wuru maka nzube ahụ. N'ime ụlọ iri atọ ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ndị wuru na White Mountains n'etiti 1850 na 1930, naanị Mount Washington Hotel ka akwadoro ma wuo dịka otu ihe site na mmalite. Charles Alling Gifford mere ya, onye Henry M. Flagler tụrụ aro ya.
Hotellọ nkwari akụ ahụ, nke e mere ka ọ mepee naanị maka oge ọkọchị na mmalite ọdịda, gụnyere ihe eji enyere ndụ aka. O nwere ọdụ ụgbọ okporo ígwè na ndị nkuzi iji kpọta ndị ọbịa na họtel ahụ site na ọdụ ahụ, ọ nwere ebe a na-akụ golf nke Donald Ross haziri (nke a ka na-arụ ọrụ ya), ọ nwere ọdọ mmiri, okporo ụzọ, ụzọ ụgbọ ala, telegraph, mmiri na-agba agba , ime ụlọ ịwụ, igwe mbuli, akụrụngwa nke oge a, igwe ọkụ eletrik nke ya (nke ka dị), osisi maka imepụta gas na-enye ọkụ kwesịrị ka ọkụ eletrik daa, otu ụdị ụdị osisi iji bipụta usoro nri kwa ụbọchị yana kwa ụbọchị akwụkwọ akụkọ maka ndị ọbịa. A gbakwụnyere nnukwu ọba maka ịnyịnya na ebe a na-adọba ụgbọala maka ụgbọala, tinyere ọnụ ụlọ maka ndị ọkwọ ụgbọ ala, ebe obibi maka ndị ọrụ (otu maka ụmụ nwoke na otu maka ụmụ nwanyị), otu ndị otu egwu, otu abụ, ebe a na-egwu mmiri n'ime ụlọ na ebe a na-eme billiard. Otu dọkịta na ndị nọọsụ abụọ nọ n'ọrụ na ogige ahụ.
O di nwute, Joseph Stickney nwụrụ otu afọ mgbe nke a gasịrị na Disemba 1903. Ọ hapụrụ ụlọ nkwari akụ abụọ na ihe onwunwe ndị ọzọ nye nwunye ya dị obere, Carolyn Foster Stickney. Ọ gbara ụlọ nkwari akụ abụọ ahụ ruo mgbe ọ nwụrụ na Nọvemba 1936. Carolyn hapụrụ ụlọ nkwari akụ abụọ ahụ nye nwa nwanne ya, bụ F. Foster Reynolds, onye na-elekọta ha site na ndagide ahụ wee banye n'Agha Worldwa nke Abụọ. O mechara ree Mount Washington Hotel na ndị nwe ọhụụ ahụ nwere ezigbo ọghọm mgbe gọọmentị US rịọrọ ka e jiri akụrụngwa maka Bretton Woods Monetary Conference. Ọgbakọ ndị mba ụwa kwadoro nzukọ mba ụwa a na ndị nnọchi anya 733 sitere na mba 44. Ebumnuche ya bụ ịmekọrịta nsogbu ego na nke mba na njedebe nke Agha IIwa nke Abụọ. Gọọmenti US rụzigharịrị nnukwu ihe na họtel ahụ.
Na 1955, e resịrị Maazi na Oriakụ Morris J. Fleisher nke Philadelphia, ndị rụrụ họtel ahụ oge iri na ise ruo mgbe erere ya na 1969 na Mount Washington Development Company. Companylọ ọrụ a mepụtara Mpaghara Bretton Woods Ski na-ewu ewu ma weghachite ọtụtụ ngwugwu, si otú a na-akwado Stickney Estate mbụ. Bretton Woods Corporation nwetara ala ahụ na 1975. N’okpuru ya, E depụtara Ugwu Washington Hotel na National Register of Historic Places na 6,400 acres nke oke ọhịa mara mma ka e rere nye gọọmentị United States maka itinye ya na White Mountain National Forest.
Na 1991, isi ohuru na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ nkwari akụ ahụ malitere dị ka otu ndị ọchụnta ego New Hampshire sonyere n'ịzụrụ ala ndị gbara ya gburugburu iji hụ na ọ dị na 21st narị afọ. Purchazụta ihe ndị mechiri emechi nke golf golf abụọ ahụ, ala gbara ya gburugburu na mpaghara kachasị elu nke New Hampshire na Bretton Woods, jikọtara nke ọma ihe izizi mbụ niile.
Na Ekele, 1999 nkwari akụ ahụ meghere maka oge oyi maka oge mbụ. Na Jenụwarị 2009, Ugwu Washington Resort mepere oghere 25,000 square foot na 25,000 square foot Conference center. Taa, ebe a ama ama emechala mmezigharị $ 60 ma nyekwa ụlọ obibi ndị dara oké ọnụ na ọtụtụ ihe omume gụnyere spa zuru oke, ebe kachasị egwu ski New Hampshire, ebe golf mbụ Donald-Ross mere, oghere ime ụlọ na n'èzí, na-agba ịnyịnya ụgbọ ịnyịnya na sleigh ịnyịnya, tenis na ịnyịnya. Ugwu Washington Hotel bu onye otu ihe mere na Hotels nke America na National Trust for Historic Preservation. Omni Hotels & Resorts na-arụ ọrụ ya n'okpuru aha gọọmentị nke Omni Mount Washington Resort. E tinyere ya na National Register of Historic Places na 18 wee wepụta National Historic Landmark na 1978 site na Ngalaba Na-ahụ Maka Ime Obodo nke United States.
Onye edemede, Stanley Turkel, bụ onye a ma ama na onye ndụmọdụ na ụlọ ọrụ nkwari akụ. Ọ na-arụ ọrụ na họtel ya, ile ọbịa na ịgba izu na-ahụ maka njikwa akụ, nyocha arụmọrụ yana arụmọrụ nke nkwekọrịta ikike ụlọ oriri na ọ hotelụ andụ na nkwado ọrụ ịgba akwụkwọ. Ndị ahịa bụ ndị nwe ụlọ nkwari akụ, ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ ịgbazinye ego. Akwụkwọ ya gụnyere: Great American Hoteliers: Pioneers of the Hotel Industry (2009), Wuru Iji Ikpeazụ: 100 + Year-Old Hotels na New York (2011), Wuru Iji Ikpeazụ: 100+ Afọ-Old Hotels East nke Mississippi (2013) ), Hotel Mavens: Lucius M. Boomer, George C. Boldt na Oscar nke Waldorf (2014), na Great American Hoteliers Mpịakọta 2: Ndị ọsụ ụzọ nke Industrylọ Ọrụ Mmepe (2016), ha niile nwere ike inye iwu site n'aka Onye edemede ụlọ site na ịga stanleyturkel.com